Pakistan oo UN-ka weydiisatay inay xilka safiirnimo ka qaado Aktarad caan ka ah dalka Hindiya – Maanta Online
Pakistan oo UN-ka weydiisatay inay xilka safiirnimo ka qaado Aktarad caan ka ah dalka Hindiya
Wasaaradda arrimaha xuquuqul insaanka u qaabilsan Dowladda Pakistan ayaa soo saartay qoraal ay Qaramada Midoobay uga dalbaneyso inay xilka safiirnimo ka qaado aktaradda caanka ah ee dalkaasi Hindiya Priyanka Chopra.
Qoraalka oo loo kala diray Qaramada Midoobay laamaheeda kala duwan iyo xarunta weyn oo ku taala magaalada Washington ee dalka Mareykanka, iyadoo arrimaha lagu eedeeyay ay ugu weyn tahay inay taageerto dagaalka u dhaxeeya dalalka deriska ah ee Pakistan iyo Hindia oo ku hubeysan Nukliyer.
Prianka Chopra oo safiir ka ahayd hay’adda UNICEF sanadkii 2010 ilaa 2016-kii bishii February ee sanadkaan 2019-ka waxay barteeda Twitter-ka ku soo qortay warar la xiriira dagaalka u dhaxeeya dalalka Pakistan iyo Hindia.
Aktaradaan caanka ah ayaa waxaa dagaal gacan ka hadal kala hor tegay nin u dhashay dalka Pakistan xilli ay ku sugneyd magaalada Clifornia ee wadankaasi Mareykanka, ninkaasi oo ku eedeynaya in aktaradda Priyanka Chopra ay sii hurineyso colaadda labada dal.
← Jubaland election results mired by conflicting regional interests
AKHRISO: Ahlu Sunnaha gobolada dhexe oo farriin culus ka soo saaray shirka Dhuusamareeb →
Wararkii ugu dambeeyay Dowladda Federaalka oo kordhisay doorkeeda dhismaha maamulka cusub ee Galmudug